फेसबुकमा भाइरल भिडियोमा खसी–खसिनी नमारी मासु खानुहोस् भन्ने युवती को हुन् ? (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > फेसबुकमा भाइरल भिडियोमा खसी–खसिनी नमारी मासु खानुहोस् भन्ने युवती को हुन् ? (भिडियो)
admin October 6, 2018 जीवनशैली, भिडियो 0
दशैं नजिकिदै गरेको बेला ‘खसिनी’ शब्द सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेको छ । यो शब्दकी जन्मदाता हुन् आशिका तामाङ । जर्मनीमा बस्ने आशिकाले हालै ‘टिकटक’ मा एउटा भिडियो पोष्ट गरिन् । उक्त भिडियो उनी मासुका लागि जनावरको हत्या नगर्न आग्रह गर्दै क्वा क्वा रोएकी छन् । ‘मासु खानुहोस, तर खसी-खसिनी नमार्नुहोला,’ भिडियोमा उनी आशु झार्दै भन्छिन्, ‘मारे पनि घरवारबिहिनलाई मात्र मार्नुहोला ।’
को हुन् आशिका ?
आशिकाको फेसबुक प्रोफाइल हेर्दा थाहा हुन्छ कि उनी स्टाफ नर्स हुन् । उनले आफू आशिका फिल्म्स प्रालीमा काम गर्ने पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
खासमा उनले एउटा नेपाली चलचित्रमा नायिका बनेर अभिनय गरिसकेकी छन् । केही वर्ष अगाडि आएको फिल्म ‘सुश्री’ मा उनी आर्यन सिग्देलको अपोजिटमा थिइन् । यो चलचित्र राम्रै भए पनि व्यवसायिकरुपमा सफल भएन । यो चलचित्र ‘आशिका फिल्म्स प्राली’ कै ब्यानरमा बनेको थियो । पहिलो फिल्ममै लगानी डुबाएकी आशिकाले दोस्रो फिल्म खेलेकी छैनन् ।
व्यापारमा असफल भए पनि ‘सुश्री’ लाई यूट्यूवमा राम्रै रुचाइएको छ । अहिलेसम्म यो फिल्म ३८ लाख पटक हेरिएको छ । धेरै सकारात्मक कमेन्टहरु आशिकाले पाएकी छन् । शिवम अधिकारीले निर्देशन गरेको फिल्ममा उनले शहरीया युवतीको भूमिकामा स्वभाविक अभिनय गरेकी थिइन् ।
आशिका हाल जर्मनीको मुन्चिङ्गेनमा बस्छिन् । उनी विवाहित हुन् र एउटा छोरा पनि छन् । पशुवध नगर्न आग्रह गरे पनि उनी सम्भवतः भेजिटेरियन भने होइनन् । उनले ममका डल्ला मुखमा हालेको फोटो पनि फेसबुकमा आएका छन् ।
भाइरल भिडियोभन्दा अगाडि उनले फेसबुमा पनि यही आशयको स्टाटस लेखेकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘दशैं आउन लाको छ । जसले जसले मासु खानु हुन्छ म उहाहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि हत्या नै गर्नु छ भने घरबारबिहिन जनावरको हत्या गर्नुहोला । कसैको आमा र छोराछोरीलाई बिचल्ली परोर हत्या नगर्नु होला प्लीज ।’
कठै ! पेट फु टेर आन्द्रा निस्किन लागिसक्यो,उपचार गराउने पैसा नभएर म र्दै छन् यी बुढा बुबा (भिडियो हेर्नुस्)